यातायात क्षेत्रमा सुधार गर्न जरुरी छ -प्रेमलकुमार खनाल - Majdoor Online
यातायात क्षेत्रमा सुधार गर्न जरुरी छ -प्रेमलकुमार खनाल
क. बस ब्यबसायीले आम्दानी गरे अनुसार राज्यलाई कर तिर्ने
ख. सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु ओसारपसार गरेमा दण्डनीय बनाउने
ग. पुराना, प्रदुषणयुक्त, जोखिमयुक्त गाडी संचालनमा निषेध गर्ने
घ. यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक , बिमा र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने
ङ. सवारी चलाउने चालकको योग्यता र बस संचालनमा संलग्नहरुको यात्रुमैत्री व्यवहार
च. लामो दुरीमा यात्रुहरुका लागि स्वास्थ्यकर खाना र सुबिधाजन्य शौचालय , बीमाको प्रत्याभूति
छ. यातायात अनुगमनको प्रभावकारी ब्यबस्था
ज. हालको साझा यातायात कै मोडेलमा सबै प्रदेशमा नगर गाउँ सम्म आउने जाने गरि , राज्यबाट यातायात सेवाको प्रारम्भ
झ. परनिर्भरता, ब्यापार घाटा , पेट्रोलियम पदार्थको अभाव , र न्युन बचत परिचालन हटाउन राष्ट्रिय पुंजी निर्माणको दर बृदि गरि उत्पादन र रोजगारी बृद्धि हुने क्षेत्रमा लगानी बृद्दि गरि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि ञ यातायात क्षेत्रमा सुधार गर्न सार्वजनिक यातायातको थालनी , साना गाडी र मोटरसाईकल आयातमा नियन्त्रणात्मक नीति अबलम्बन गर्न जरुरी छ।
Previous: व्यवसायीको आन्दोलनमा यातायात मजदुरको साथ नरहने-अध्यक्ष सोम तामाङ्
Next: नयाँ निर्देशिका यातायात मजदुरहरुको हितमा ः मन्त्री महासेठ